Owesifazane ongenazo izincwadi zokushayela uwine imoto | Scrolla Izindaba
Owesifazane ongenazo izincwadi zokushayela uwine imoto
Usebenzise ama-R219 nje kuphela ukuthenga igilosa, wabe eseziwinela imoto entsha sha uQueen.
UQueen ungumnikazi wemoto entsha sha i-Datsun Go ayiwine kumqhudelwano wezimoto zamakhasimende obuhlelwe i-Pan Africa nabakwa-Pick ‘n Pay.
UQueen Tsebe oneminyaka engama-28 ubudala, ongasebenzi uthe yize ewine imoto kodwa:
• Akanazo izincwadi zokushayela
• Akanayo imali yomshwalense wemoto
• Akanayo indawo yokupaka imoto yakhe entsha
UQueen ohlala kweminye yemijondolo eminyene e-Alexandra ebizwa nge-Setlwetla, akakholwanga ngesikhathi ukhiye awukhethe kwi-raffle draw uvula imoto.
Abadlali abane bokugcina bekufanele bakhethe ukhiye owodwa kulaba abane. Noma ngubani obezothatha ukhiye ofanele, ubezowina imoto.
Lapho ebona ukuthi ukhiye awuthathile uvula imoto, uQueen wamemeza ngenjabulo. Uhlale esihlalweni somshayeli wafonela ugogo wakhe amshiya emuva ekhaya e-Polokwane, e-Limpopo.
“Ngikhuliswe ugogo. Usondelene kakhulu nenhliziyo yami. Nguyena okwakufanele ezwe izindaba ezimnandi kuqala, kusho uQueen.
Uthe uyingane yakubo yesi-7 emndenini wabayisishiyagalombili.
“Umama akasebenzi. Ubaba ungumakhi wezitini othola imisebenzi yesikhashana. Sakhula sihlupheka. Lokhu kukhulu emndenini wethu. Le yimoto yokuqala emndenini wethu.
“Sengijahe ukuthi ngigibelise umndeni wakithi, izingane zakwethu nabazali bami, kusho uQueen.
Kodwa ngaphambi kokuba kufezeke iphupho lokushayelela umndeni wakhe, uQueen kumele afunde ukushayela kuqala.
UMqondisi Ophethe kwa-Pick ‘n Pay nase-Pan Africa uOliver Phaahla uthe, lena ngeminye yemincintiswano abayenza esitolo njengendlela yokubuyisela emuva emphakathini.
“Siyayazi futhi siyayibona imiphumela ye-Covid-19 kubahlali base-Alexandra. Lesi sitolo besingematasa njengakuqala ngaphambi kokuba i-covid-19 ishaye ogwini lwaseNingizimu Afrika. Abantu elokishini bebebhekene nobunzima. Abantu abaningi bebehlupheka futhi basahlupheka,” kusho uOliver.
Umncintiswano wokuwina imoto ubuphethwe yi-Alex FM ebibambisene nabakwa-Pick ‘n Pay.
Umphathi wesiteshi uTakalani Nemangowe uthe, lesi siteshi simjabulele kakhulu uQueen.
“Simfisela ukushayela okuphephile emigwaqeni ematasa yase-Alexandra”.